အတတ်ပညာ China Atc funiture စက်စက်ရုံနှင့် ထုတ်လုပ်သူ |JCUT
1. ဤစက်သည် GDZ သို့မဟုတ် HQD အမှတ်တံဆိပ် Air Cooling Spindle ကို အသုံးပြုသည်။9kw မြင့်မားသောပါဝါဗိုင်းလိပ်တံ၊ ပိုမိုမြင့်မားသောလုပ်ဆောင်မှုစွမ်းဆောင်ရည်။အဆင့်မြင့် အလိုအလျောက် ကိရိယာ ပြောင်းလဲမှု ပရိုဂရမ်ကို အသုံးပြု၍ ကိရိယာ ပြောင်းလဲမှု ပိုမြန်သည်။
2. ဆာဗာမော်တာ၊ တိကျမှုမြင့်မားသောဂီယာနှင့် တင်သွင်းလာသော rack drive တို့ဖြင့် တပ်ဆင်ထားပြီး၊ ဆူညံသံနည်းသော၊ မြန်ဆန်သောအမြန်နှုန်းနှင့် တည်နေရာတိကျမှုမြင့်မားသောစက်ကို တည်ငြိမ်စွာလည်ပတ်စေသည်။
3. လေးလံသော ဇရာဂဟေဆက်ခြင်း အိပ်ရာ (ငါးမျက်နှာ ကြိတ်တူးဖော်ခြင်း တိကျမှု 0.02 မီလီမီတာ)။
4. ထူထပ်သော နံရံစတုရန်းပြွန်နှင့် အလင်းတန်းအတွက် သံမဏိအမြှေးပါးဖြင့် ထပ်တူကျသော အလင်းတန်းအိပ်ရာကို ပြုပြင်ခြင်း။ကော်လံ၏ တစ်သားတည်းသော ပုံသဏ္ဍာန်သည် အချိန်အကြာကြီး ပုံပျက်မသွားပါ။
5. ပါဝါမြင့်မားသော ဖုန်စုပ်ပန့်၊ စုပ်အားကောင်းခြင်း။မူပိုင်ခွင့် ဒီဇိုင်း 50MM စုပ်ယူနိုင်သော လုပ်ရည်ကိုင်ရည်၊ PVC ပိုက်ချိတ်ဆက်မှု ကောင်းမွန်စွာ ချိတ်ပိတ်ခြင်း၊ အပြေးဘုတ်မရှိပါ။
6. အရန်လူမီနီယမ်ဘား blanking လုပ်ဆောင်ချက်ဖြင့် အလိုအလျောက် ကြွေပြားအလျားလိုက် တွန်းချခြင်း အပြည့်အ၀။စစ်ဆင်ရေးက ပိုထက်မြက်ပြီး လုပ်အားကို ချွေတာတယ်။
7. Spindle အလိုအလျောက်အခန်းကန့်အမျိုးအစား ပေါင်းစပ်ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားခြင်းနှင့် ဒုတိယဖုန်မှုန့်များကို တွန်းစက်ဖြင့် ဖယ်ရှားခြင်း။ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သော လုပ်ဆောင်မှု၊ ပိုမို လူသားဆန်သည်။
8. ကျွန်ုပ်တို့သည် Hiwin စတုရန်းရထား၊ ကောင်းမွန်သောအမှတ်တံဆိပ်နှင့် အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော တင်သွင်းမှုကို အသုံးပြုပါသည်။ဂီယာအကြောင်း၊ X၊ Y ဝင်ရိုးသည် ကောင်းမွန်သော rack drive၊ Z-axis ball screw drive ကိုအသုံးပြုပါ။စက်အစိတ်အပိုင်းများ၏ တိကျမှု၊ ခိုင်ခံ့မှုနှင့် အကြမ်းခံမှု မြင့်မားသည်။
ဤစက်သည် ကက်ဘိနက်ထုတ်လုပ်သူများမှ အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော အထူးပြားပရိဘောဂထွင်းထုစက်ဖြစ်သည်။၎င်းသည် panel ဗီရိုများနှင့်အခြားအစိတ်အပိုင်းများ၊ ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ ထွင်းထုခြင်း၊ အပေါက်ဖောက်ခြင်း၊ တူးဖော်ခြင်း၊ ဘက်စုံသုံး၊ ကုန်ကျစရိတ်၊ လုပ်အားနှင့်အချိန်ကုန်သက်သာစေရန်သင့်လျော်သည်။ဖိနပ်ပုံး၊ရုံးသုံးပရိဘောဂ၊စိတ်ကြိုက်ပရိဘောဂ။
Longteng တတိယမျိုးဆက်Linear R8 ATC CNC Router
အလုပ်ဧရိယာ (S*Y*Z) 1220*2440*200mm (အရှည် 2800 စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်မှု ပံ့ပိုးမှု)
ဗိုင်းလိပ်တံ GDZ လေအေးပေးစက် 9KW
Tool မဂ္ဂဇင်း Linear 12 ကိရိယာများ(8-16 tools စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်းကို ပံ့ပိုးပေးသည်)
မော်တာဝတ်ပါ။ Dorna 1500W (2 in 1 driver)
ယာဉ်မောင်းကို အမှုထမ်းပါ။ မော်တော်ကားမောင်းသူအား ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
အင်ဗာတာ။ 11kw Hpmant
ထိန်းချုပ်မှုစနစ် ထိုင်ဝမ် syntec 60CA
ဂီယာမလာဘူး။ Y ဝင်ရိုး 30 စတုရန်း
ဘောလုံးဝက်အူ TBI 2510 ဝက်အူ
slider Y aixis30 ဆလိုက်ဒါ
ဖုန်စုပ်စက် နှစ်ထပ်အိတ် 5.5KW
ဖုန်စုပ်စက် ရေစက်ဝန်း 7.5KW
တတိယမျိုးဆက် Lonteng မူပိုင်ခွင့်ဖွဲ့စည်းပုံ (လွတ်လပ်သောထိန်းချုပ်ရေးဝန်ကြီးအဖွဲ့)
အိပ်ယာဖွဲ့စည်းပုံ လေးလံသော အိုမင်းရင့်ရော်မှုကို ကုသခြင်း ဂဟေကုတင် (ငါးမျက်နှာကြိတ်ခွဲခြင်းနှင့် တူးဖော်ခြင်း တိကျမှု 0.02 မီလီမီတာ)
Crossbeam ထူထပ်သော နံရံစတုရန်းပိုက်နှင့် စတီးချွတ်ဂဟေဆက်ခြင်း နည်းပညာသည် ကော်လံ၏ သွန်းထည်တစ်ခုလုံးကို အချိန်အကြာကြီး ပုံပျက်စေခြင်းမရှိပါ။
ကွန်ပြူတာလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးအဖွဲ့ Longteng မူပိုင်ခွင့် ဗီရိုစီးရီး၊ အပြည့်အ၀ အလုံပိတ် ကြီးမားသော မျက်နှာပြင် ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေး လည်ပတ်မှု ဗီရို
z ဝင်ရိုး အစိတ်အပိုင်းများ Z ဝင်ရိုးမော်တာသော့ခတ်လုပ်ဆောင်ချက်၊ Z ဝင်ရိုးမော်တာဝက်အူပံ့ပိုးမှုထိုင်ခုံ
ဖုန်စုပ်စားပွဲ မူပိုင်ခွင့်ဒီဇိုင်း 50MM စုပ်ယူနိုင်သော လုပ်ရည်ကိုင်ရည်၊ PVC ပိုက်ချိတ်ဆက်မှု တံဆိပ်ခတ်ခြင်း ကောင်းမွန်ပြီး ပန်းကန်ပြားကို မလည်ပတ်စေပါ။
နေရာချထားခြင်း။ အလူမီနီယံ ကန့်လန့်ကာဖြင့် ထုပ်ပိုးမှုနေရာချထားခြင်း ဆလင်ဒါနှစ်ထပ်
အလိုအလျောက် ဖြုတ်ချခြင်း။ အလိုအလျောက် ကြွေပြားအပြည့် အလျားလိုက် တွန်းလှန်ထားသော ခါးပတ် အရန် အလူမီနီယံဘား လုပ်ဆောင်ချက်ကို ရပ်တန့်ပါ။
ဖုန်မှုန့်နည်း အလိုအလျောက် ဗိုင်းလိပ်တံ အပိုင်းပိုင်းခွဲခြင်း ပေါင်းစပ်ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားခြင်းနှင့် ဒုတိယဖုန်မှုန့်များကို ဖယ်ရှားခြင်း။
ယခင်- Linear atc cnc router
နောက်တစ်ခု: 1325 disc tool atc cnc router
လက်ကား Cnc Atc Router စျေးနှုန်းစာရင်း
လက်ကား Topdirect Cnc Router စက်